यस्ता छन् नुहाउँदा गरिने केहि गल्ती र असरहरु - ज्ञानविज्ञान
हामी नुहाउँदा कति समय लगाएर नौछौ र कति दिनको फरकमा ? नुहाउँदा खासै कसरत गर्नु पर्दैन ।
नुहाउँदा खासै कसरत गर्नु पर्दैन । शरीरमा साबुन लगायो, पानी हालेर पखाल्यो । तर, नुहाउने पनि आफ्नै विधि छ । नुहाउने तरिका नमिल्दा छाला एवं स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ । त्यसैले नुहाउने कुरामा पनि आधारभूत जानकारी भएको राम्रो हो ।
१. धेरैबेर ननुहाउने
गलत तरिका- २० मिनट नुहाउनु
सही समय- १० मिनट
तातोपानीले र धेरैबेर नुहाउनु छालाका लागि हानीकारक हुने गर्छ । यसले छाला चिलाउने समस्या सुरु हुनुका साथै घाउ पनि हुनसक्छ ।
नुहाउने सबैभन्दा ठीक समय जम्मा १० मिनट हो । त्यसो गर्नाले शरीरको दुर्गन्ध तथा धुलोमैला सफा हुनुका साथै शरीरसमेत स्वस्थ रहन्छ ।
२. फोम जेल तथा साबुनको अधिक प्रयोग
गलत बानी- जिउमा साबुन धस्ने
सही तरिका- स्पञ्जको प्रयोग
केमिकलयुक्त साबुन शरीरमा जति धेरै लगायो, त्यति छाला बिगि्रने वा समस्या आउने क्रम बढी हुन्छ ।
अझ, साबुनमा प्रयोग हुने हानीकारक रसायनले शरीरको छालालाई रुखो बनाउनुका साथै त्यसमा भएका प्राकृतिक तेलसमेत नष्ट गर्छ ।
त्यसैले नुहाउँदा सीधै साबुन वा सावर जेलको साटो स्पञ्जको प्रयोग सबैभन्दा राम्रो उपाय हो । स्पञ्चमा केही थोपा सावर जेल, फोम वा साबुन हालेर जीउमा दल्नाले त्यसमा भएका हानीकारक केमिकलले छालालाई धेरै असर गर्न पाउँदैन र छाला सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ ।
३. पुरानो तथा भिजेको स्पञ्जको प्रयोग
गलत तरिका- भिजेको स्पञ्ज
सही तरिका- सुख्खा स्पञ्ज
भिजेको स्पञ्जलाई ब्याक्टेरियाहरुको घर पनि भन्ने गरिन्छ । यस्ता स्पञ्जमा ढुसी पर्नुका साथै विभिन्न किटाणुहरुले संक्रमण गर्ने गर्छ । त्यसैले यस्ता स्पञ्ज प्रयोग गर्दा निकै सावधानी अपनाउनु जरुरी छ ।
महिनामा एक पटक वा चार सातामा एक पटक स्पञ्ज बदल्नाले शरीरमा विभिन्न रोगहरुको संक्रमण हुन पाउँदैन ।
त्यति मात्र होइन, हरेक पटक नुहाउँदा सफा तौलियाको प्रयोग उचित मानिन्छ ।
४. धेरैबेर जीउ पुछ्नु
गलत तरिका- पूरै जीउ सुख्खा पार्ने
सही तरिका- हल्का पुछ्ने
प्रायः मानिस एक पटक नुहाइसकेपछि धेरैबेरसम्म जीउ पुछिरहेका हुन्छन् । जीउमा भएको पानी सुकाउन शरीर पुछ्न आवश्यक पनि छ । तर, पूरै जीउ सुख्खा हुनेगरी जीउ पुछ्नु पनि शरीरका लागि घातक हुनसक्छ ।
त्यसैले हरेक पटक नुहाइसकेपछि हल्का किसिमले शरीरमा भएको पानी पुछ्नु पर्छ । शरीर पुछ्दा नरम तौलियाको प्रयोग गर्नुपर्छ । साथै, हल्का तवरले मात्र पुछ्नु पर्छ ।
शरीरलाई पूरै सुख्खा हुन दिनु हुँदैन । त्यसपछि शरीरमा क्रिम तथा पाउडरको प्रयोग गर्नुपर्छ । यसले शरीरलाई कोमल, मुलायम तथा स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
५. अत्यधिक तातोपानीको प्रयोग
गलत तरिका- अत्यधिक तातोपानी
सही तरिका- ३५ देखि ४० डिग्रीको मनतातो पानी
तातोपानीले शरीरलाई सुख्खा बनाउनुका साथै छालाको नरमपनालाई समेत हटाउँछ । नुहाउँदा अत्यधिक तातोपानी प्रयोगले शरीरमा भएको तेलियपना नाश हुन्छ र शरीर रुखो हुन्छ ।
साथै, अत्यधिक तातोपानी प्रयोगले रक्त प्रवाहसमेत बढाउँछ, जसका कारण शरीरमा जलन हुने, घाउ हुने र पोल्ने गर्छ ।
तपाइ दैनिक नुहाउनुहुन्छ र नुहाउँदा स्याम्पुको प्रयोग गर्नुहुन्छ भने गलत गर्दै हुुनुहुन्छ । दैनिक स्याम्पुको प्रयोगले कपालमा भएको नेचुरल तेललाई हटाउने काम गर्छ । जसका कारण चमक घट्दै जान्छ । त्यसैले, हप्तामा दुईपटक मात्र कपालमा स्याम्पुको प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
तातो पानीले नुहाउँदाका बेफाइदा
१. तातो पानीले हात र गोडाका नङमा खराब असर पार्छ । नङ भाँचिने, संक्रमण हुने र नङवरिपरिको छाला फाट्ने समस्या आउँछ ।
२. तातो पानीले छालाको कोषिका क्षतिग्रस्त बनाउँछ । समयअगावै चाउरी पर्न थाल्छ ।
३. तातो पानीका कारण रौं झर्ने र टुक्रिने समस्या आउँछ ।
४. तातो पानीले छालाको चमक गायब बनाइदिन्छ ।
५. तातो पानीले नुहाउँदा छालामा रातोपना, –याशेज र एलर्जीको समस्या हुन्छ । तातो पानीले छालालाई सुक्खा बनाउँछ । त्यसबाट छालाको संक्रमणको खतरा बढ्छ ।
६. यसले कपालमा खराब असर पार्छ । कपालको मोइस्चर कम हुन्छ र कपाल रफ तथा ड्राई हुन्छ ।
७. तातो पानीका कारण छालाको सुक्खापन बढ्छ र चिलाउने समस्या आउँछ ।
८. तातो पानीले नुहाउँदा आँखा सुक्खा हुन्छ । आँखा रातो हुने, चिलाउने र पानीबाट आँसु बग्ने समस्या आउँछ ।
९. तातो पानीले तालुलाई सुक्खा बनाउँछ । यसले चायाँ ल्याउन सक्छ ।
चिसो पानीले नुहाउँदाका फाइदाहरु
१. चिसो पानीले नुहाउँदा शरीरमा आनन्द आउनुका साथै यसले शरीरमा रक्तसञ्चार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
२. यसले शरीरमा रोगसंग लड्न सक्ने क्षमत अर्थात् रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि गर्छ ।
३. चिसो पानीले नुहाउँदा शरीरमा आँफै तापको मात्रामा बृद्धि हुन्छ जसले पाचन प्रक्रियालाई मजबुद बनाउँछ ।
४. यदि तपाइँ ब्यस्त भई थकित महसुस गर्नुभएको छ भने चिसो पानीले नुहाउनुस् यसले तपाइँको थकान कम गर्नुका साथै शरीरलाई फूर्तिलो बनाउँछ ।
५. चिसो पानीले नुहाउँदा शरीरमा रहेको यूरिक एसिडलाई चलायमान बनाउनुका साथै बिभिन्न चोटपटक लागेका दाग तथा खतमा बस्ने ब्याक्टेरिया हटाउन मद्दत गर्छ ।
६. चिसो पानीले नुहाउँदा पुरुषको प्रजनन क्षमतामा बृद्धि ल्याउनमा मद्दत गर्छ ।
राति सुत्नुअघि नुहाउँदा हुने फाइदा
सामान्यतया मानिसहरु बिहान नुहाउछ्न। यो कसैको बानि हुन्छ भने कसैलाई चाही सधै नुहाउने बाध्यता नै हुन्छ । तर भने रातिको समयमा नुहाउने बानि पनि एकदम राम्रो हो ।
के तपाईँले सुत्नु अघि नुहाउने बानी राख्नु भएको छ ? सम्भ वत नहोला । भएपछि त राम्रो । तर यो कुरा भन्दा पहिले तपाई एउटा कुरा थाहा पाईराख्नुहोस् । तातोपानीले नुहाउँदा रक्तसञ्चार सुरुमा केही बढी हुन्छ, तर पछि मन्द हुन्छ ।
तर चिसो पानीले नुहाउँदा रक्तसञ्चार सुरुमा मन्द र पछि केही बढी हुन्छ । त्यसैले चिसो पानीले नुहाउनु राम्रो हुन्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले सुहाउनको लागि चिसो पानी रोज्नुहोस् । चिसो पानीले दिमागलाई ठण्डा बनाएर राख्न मद्धत गर्ने आयुर्वेदिक दृष्टि छ । यदि दिन चिसो पानीले नुहाएर सुरु हुन्छ भने दिनभर नै ताजा महसुस हुन्छ । यसका साथै शारीरिक सौन्दर्य पनि कायम रहने हुन्छ ।
Don't Miss it नवजात शिशुलाई भेट्नु अघि केही महत्वपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्छ जानिराखाै
Up Next स्वस्थ्य जीवन कुकुर पाल्दा